ကိုဩဒိနိတ်: 12°20′N 1°50′W﻿ / ﻿12.333°N 1.833°W﻿ / 12.333; -1.833
ဆောင်ပုဒ်: "Unité–Progrès–Justice" (ပြင်သစ်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Une Seule Nuit / Ditanyè (ပြင်သစ်)
လူမျိုးစု (၂၀၁၀ ခန့်မှန်း)
၁၅.၃% ဒေသခံ ယုံကြည်မှု
၁.၀% ဘာသာမဲ့နှင့် အခြား
ပြည်ထောင်စု တစိတ်တပိုင်းသမ္မတ ဖွဲ့စည်းပုံ သမ္မတနိုင်ငံ
• အထက်ဗော်တာသမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခဲ့
၁၉၆၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၅ ရက်
၁၉၆၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်
၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက် – နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်
၂၇၄,၂၀၀ km2 (၁၀၅,၉၀၀ sq mi) (အဆင့်: ၇၄)
၂၁,၅၁၀,၁၈၁  (အဆင့် - ၅၈)
၆၄/km2 (၁၆၅.၈/sq mi) (အဆင့် - ၁၃၇)
နိမ့် · ၁၈၂
ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း (၂၇၄,၂၀၀) ရှိပြီး လူဦးရေ ၁၅,၇၅၇,၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။ ရှေးယခင်က အထက်ဗိုလ်တာသမ္မတနိုင်ငံ (Republic of Upper Volta) ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့တွင် ထိုစဉ်က သမ္မတဖြစ်သူ သောမတ်စ်ဆန်ကာရာ (Thomas Sankara) က နိုင်ငံတွင်း လူများစုဖြစ်သော မိုရေး (Mòoré language) နှင့် ဒီယိုလာ (Dioula language)ဘာသာစကားအားဖြင့် the land of upright people ဟုအမည်ရသော ဘာကီးနားဖားဆိုအဖြစ်အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဘာကီးနားဟူသည် မိုရေးဘာသာစကားအားဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ဖားဆိုမှာ ဒီယိုလာဘာသာစကားအားဖြင့် ဖခင်အိမ်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံသားများကို ဘာကီးနားဘေး (Burkinabè) ဟုခေါ်ဆိုသည်။
ဘာကီးနားဖားဆို၏ မြို့တော်မှာ ဝါဂါဒူဂူ (Ouagadougou) ဖြစ်သည်။ အာဖရိကသမဂ္ဂ (African Union)၊ အစ္စလမ်ကွန်ဖရင့်အဖွဲ့ (Organization of the Islamic Conference)၊ အနောက်အာဖရိက စီးပွားရေးအဖွဲ့ (Economic Community of West African States)၊ Community of Sahel-Saharan States နှင့် La Francophonie တို့၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
အာဖရိကတိုက်အနောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ကုန်းတွင်းပိတ်၍ ဆင်းရဲမွဲတေလှသော ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက အယ်လ်ကိုင်းဒါးနှင့် အိုင်အက်စ် အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့တို့နှင့် ဆက်စပ်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူပေါင်း ၂,၀၀၀ သေကြေခဲ့ရပြီး လူ ၁ သန်းကျော် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရခြင်းကြောင့် ခါးသီးသော အတွေ့ အကြုံများ ပြည့်နှက်နေ သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်ကလည်း ဘာကီးနားဖားဆို နိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်ဒေသရှိ ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် သေနတ်သမားများ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၁၄ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်လည်း ရှိခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများဆက်တိုက်ရှိခဲ့ပြီး ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ သမ္မတကာဘိုရီက လုံခြုံရေး အကျပ်အတည်း အကြောင်းပြချက် ဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်ကို ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်တွင် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု အယ်လ်ဂျာဇီးယားသတင်းဌာနက ဖော်ပြသည်။
၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီ ၂၄ရက် ညနေပိုင်းတွင် စစ်တပ်က အာဏာရယူပြီး သမ္မတRoch Kaboreကို ရာထူးတာဝန်မှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
အာဖရိကသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌMoussa Fakiက ဘာကီးနားဖားဆိုစစ်တပ်၏လက်နက်ဖြင့်အာဏာလုယူရန် ကြံစည်မှုကို ပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုတ်ချကာ စစ်တပ်နှင့်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများက နိုင်ငံလုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ကြရန်၊ နိုင်ငံ၏ပြီးပြည့်စုံမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ Roch Kabore၏ လုံခြုံရေးကို အာမခံချက်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ပြောကြားခဲ့သည်။ 
ဘာကီးနားဖားဆို နိုင်ငံမှ စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ပေါလ်-ဟန်ရီ ဆန်ဒိုဂို ဒမ်မီဘာ (Lt. Col. Paul-Henri Sandaogo Damiba ) က နိုင်ငံ၏ သမ္မတသစ်အဖြစ် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့မှုအား ဘာကီးနားဖားဆို နိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ရုပ်သံလွှင့်ဌာန(RTB) က တိုက်ရိုက်(Live) ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကောင်စီ၏ ယာယီသမ္မတ Boureima Cisse က ဒမ်မီဘာအနေဖြင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ပဋိညာဉ်စာတမ်းက သတ်မှတ်ပြဌာန်းပေးသည့် ကာလအတွင်း ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံသမ္မတအဖြစ် တိုင်းပြည်ကို စီမံအုပ်ချုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ 
↑ André, Géraldine (31 May 2007). "École, langues, cultures et développement" (in fr). Cahiers d'Études Africaines 47 (186): 221–247. doi:10.4000/etudesafricaines.6960. ISSN 0008-0055.
↑ Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-12-21. Retrieved 2016-02-18.CS1 maint: archived copy as title။
↑ Distribution of family income – Gini index။ The World Factbook။ CIA။ 23 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ&oldid=734654" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။